काठमाडौको समृद्धि स्कूलको रेस्पोन्सिबल ईको क्लबमार्फत विद्यालयबाट उत्पादन भएका कुहिने फोहोरलाई प्रयोग गर्दै मल उत्पादन शुरु गरेको छ । विद्यालयले विन तथा पिट कम्पोष्टिङ्ग विधिप्रयोग गर्दै विद्यालयको भान्साबाट निस्किएका तरकारीका बोक्रा, पात, फलफूलका बोक्रा तथा यदाकदा खेर जाने गरेका खाना परिसरमा बनाईएको खाडलमा राखेर मल बनाईएको हो ।
करिब २ महिना देखि शुरु गरिएको सो अभियानले विद्यार्थीलाई फोहोरको महत्व बुझाउन सहयोग गरेको र फोहोरलाई स्रोतको रुपमा परिणत गरिएको संयोजक सुजनलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसरी उत्पादन गरिएको मललाई विद्यालयमा लगाईएका बोट विरुवामा राखेर विद्यार्थीलाई वातावरणको महत्व बुझाउन सहयोग पुगेको छ । उपत्यकाका धेरै विद्यालयलाई अझै वातावरणका मुद्दालाई सैद्धान्तिक रुपमा मात्र व्याख्या गरेको अवस्थामा समृद्धिको यस अभियानलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
हाल थालनी गरिएको कामले प्रभाव सकारात्मक रहेकाले आगामी दिनमा यसलाई क्रमिक रुपमा विस्तार गर्दै लैजाने स्कूलका प्रिन्सिपल नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । वर्तमान शैक्षिक प्रणालीमा वातावरणका मुद्दा कसरी समावेश गर्ने ? रेस्पोन्सिबल ईको क्लबको कार्य प्रणाली कस्तो हुन्छ ? अहिलेको पूस्तालाई वातावरणीय मुद्दामा समावेश कसरी गराउने ? लगायतका विषयमा प्रिन्सिपल श्रेष्ठ यसो भन्नुहुन्छ ।